Dicas De Semalt: 8 iManeiras De Proteger Seu Сonteúdo
Ukufumanisa ukuba umntu uthathe umxholo wakho oyimvelaphi ubuhlungu kwaye uphefumle. Uyabhala ngokusekelwe kolwazi oluthe lwafumana umsebenzi okanye umdla okanye uchithe ixesha lokuphanda kunye nokukhothoza kwimithombo eyahlukeneyo. Emva koko umntu uza kunye kwaye ubeke umsebenzi wakho kwisayithi yabo ngegama labo kwinqanaba. Bangathatha ixesha lokutshintsha okanye ukulungiswa kwakhona amagama, kodwa ngokucacileyo umsebenzi wakho.
Ukuqonda ukubaluleka kokukhusela umxholo wakho, u-Andrew Dyhan, ingcali iSemalt Iinkonzo zeDijarsi zichaza indlela onokunciphisa amathuba okuba umxholo wakho.
Izixhobo ezahlukeneyo ziyafumaneka ukuze zihlolisise ngokuzenzekelayo ukutshala - virtual pediatrics telemedicine. Ezi zixhobo ziphengulula kwi-intanethi kwaye zijonge izinto ezifana neenkcukacha zolwazi ngezikhathi ukuze zikhangele umxholo ochaziweyo. Bavame ukuchonga amagama athile abiwe kwaye banike ipesenti yezinto eziphathekayo kwicandelo elithile lomsebenzi. Unokufumana izixhobo zamahhala kunye ezihlawulelwayo ngokukhangela "umgcini wecala" kwinjini yakho yokukhangela.
IiLungelo zoLungelo lobunikazi
Kukho iintlobo ezintandathu zeelayisenisi zobunikazi bokudala. Zilawula indlela eninzi ngayo umxholo wakho ongasetyenziselwa, nokuba ingaba omnye umntu usebenzisa isiqulatho sakho kufuneka anikezele kuwe, kwaye ingaba ingasetyenziswa kwiinjongo zorhwebo. Ukuba usanda kuvula i-website, unokufuna ukuvumela ukusetyenziswa kolunye umxholo wakho kunye nemimiselo ethile, kuba umsebenzi wakho ubonakala kwezinye iisayithi unako ukudweba abantu kwisiza sakho kunye nokukhulisa ishishini lakho. Yenza uphando oluneentlobo ezahlukeneyo zeelayisenisi zobunikazi bokudala kwaye ukhethe enye efanelekileyo imeko yakho yangoku.
Phakathi kweeplagi ezininzi ezifumaneka kwi-WordPress kukho enye ebizwa ngokuba yi-CopyProtect. Yenza nje oko igama layo lithethayo-likhusela umxholo wakho ukuba ukhankanywe, ukopishwe, kwaye udluliselwe kwenye indawo. Kulula ukuyifaka kwaye, ngokungafani nezinye izixhobo ezenza into efanayo, aziyi kuchaphazela i-SEO yakho.
Khusela i-HTML yakho
Hamba ngaphaya kokuthintela ikopi kwaye unamathisele ukweba kwezinto ezibonakala kwisiza sakho ngokukhusela i-coding emva kwesiza sakho. I-HTML Qaphela isofthiwe esenza abacuki bafikelele ekufikeleleni ikhowudi yakho yomthombo kwaye bayisebenzise kwenye indawo.
Faka i-watermark yakho kuyo yonke into oyishicilelayo. Ngokwenza oku, nantoni na ethathwa kwisayithi yakho iya kuba negama lesayithi lakho eliqhotyoshelwe kuyo.
UMthetho we-Digital Millennium Copyright Act ka-1998 uvumela ukubhaliswa ngokutshintshisa ukukwazi ukubeka ibheji yabo kwiwebhusayithi yakho. Ezi zilumkiso ziza kuba ngamasela ukuba umsebenzi wakho unelungelo lobunikazi kwaye bangabikwa ngokuba.
Gcina i-Draft ye-Yonke into
Oku kwenza kube lula ukubonakalisa ukuba ungumbhali oyimvelaphi yomsebenzi webiwe. Njengokugcina iirekhodi zerhafu, ukugcina iimvelaphi zezinto zonke ozibeka kwiziko lakho kungena kumandla kakhulu xa uqhuba iingxaki phantsi kwendlela.
Ukuba umntu uthatha umxholo wakho kwisayithi yakho, bhengeza ngokukhawuleza. Qhagamshelana nomphathi wabo webmaster kwangoko. Chaza ilayisenisi yakho yokudala kubo. Chaza i-copyright yakho. Ukuba behluleka ukususa umxholo ochaziweyo, baxelele kwi-DMCA. Baza kufikelela kumntu osisiphumo ngokukhawuleza.
Akunakwenzeka ukuqinisekisa ukuba umsebenzi wakho onzima awuyi kukopishwa, kodwa ngokulandela amanyathelo angentla, unokunciphisa amathuba okuba kwenzeke kuwe.